Thwebula Yahoo Mail 5.3.1 – Vessoft
Thwebula Yahoo Mail
Yahoo Mail – a software ukuphatha imeyili kusuka Yahoo !. Isofthiwe ihambisa ngokuzenzakalelayo imibiko ezigabeni ezahlukene kanye azisa umyalezo engenayo efasiteleni pop-up. Yahoo Mail ikuvumela ukuphatha imeyili usebenzisa akhawunti ahlukene futhi ushintshanise ngokushesha phakathi kwabo. Isofthiwe futhi isekela ukuvumelanisa nge uhlu contact of device yakho. Yahoo Mail kuhlanganisa izikhumba eziningi oyifisayo isizinda software for izidingo umsebenzisi.
Ukusatshalaliswa enembile imiyalezo izigaba
Ukucinga for imiyalezo
Ukuvumelanisa uhlu contact of device
Amazwana on Yahoo Mail:
Yahoo Mail Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... AVG 5.2.0.1
English, Afrikaans, Українська, Français... Odnoklassniki 16.10.27